ओसाका देखि क्योटो सम्म - कसरि ओसाका देखि क्योटो सम्म जाए? - Samurai and Ninja in Japan
ओसाका देखि क्योटो सम्म – कसरि ओसाका देखि क्योटो सम्म जाए?
कसरी ओसाकाबाट क्योटोबाट जानुहोस्? Shinkansen छिटो रेल र अन्य ट्रांसटिनटिन विकल्पहरू
ओसाका देखि क्योटो सम्म जाने को लागि सबै भन्दा राम्रो तरीका Shinkansen छिटो ट्रेन हो। Shinkansen छिटो रेल को लागत (ओसाका- क्योटो) एक-तरफ को लागि ¥ 1420 हो । राउन्ड ट्रिपको लागि लागत लगभग ¥ 2840 हो । ओसाका-क्योटो शंकन्सेनन सवारी लगभग 15 मिनेट छ । पहिलो शंकसेन्सन छिटो रेल 6:30 पूर्वाह्न ओसाकाबाट प्रस्थान गर्दछ । अन्तिम शंकसेनन छिटो रेलगाडी 22:30 अपराह्न ओसाकाबाट प्रस्थान गर्दछ। त्यहाँ हरेक 10 मिनेटको शंकसेन्सन बुलेट ट्रेन सेवा छ । तपाइँ अनलाइन रिजर्भ गर्न सक्नुहुनेछ तर यो स्टेशनमा टिकट खरीद गर्न अधिक सुविधाजनक छ।
Shinkansen फास्ट रेलवे देखि ओसाका सम्म क्योटो
Categoriesब्लग Nepali TagsShinkansen देखि यात्रा कसरि गर्नुहोस फास्ट रेलगाडी, ओसाका देखि क्योटो, ओसाका देखि क्योटो सम्म, ओसाका देखि क्योटो सम्म कसरि प्राप्त गर्न को लागी, जापान, जापान परिवहन, जापानमा यात्रा, बुउलेट ट्रेन्स